I-China ibhetri yoqobo yombane ityuwa kunye nepepper mill ESP-1 abavelisi kunye nabathengisi | Nciphisa
Okucetyiswayo zombane ityuwa nepepile usila setha Unokugaya iintlobo zezithako, ezinje ngetyuwa yaselwandle, ipepile emnyama, ipepile, ikumin, njl.
Umsebenzi ulula kwaye ulula. Inkqubo ye- ityuwa usila Ingasetyenziselwa ukugaya ukutya okongezelelekileyo kweentsana. Ifana nembewu yesesame, kukho izinto ezimbini ezisilayo kwiindawo zokutyela nasekuphekeni: enye yeyetyuwa enye ipepile, enokusetyenziselwa ukutya kwaseTshayina naseNtshona;
Ibhotile yebhodi zombane ityiwa yepepile yetyuwa yenziwe ngentsimbi engama-304 engenasici, ekhuselekileyo, engenatyhefu kwaye engenabungozi, enzima kwaye enxibayo, kwaye kulula ukuyicoca. Inkqubo ye- zombane I-pepper grinder yenza ukuba iinkcukacha zithambe kwaye zisebenze; intshukumo yodongwe enganyangekiyo inobulukhuni obuphezulu kakhulu, ivumela iziqholo ukuba zingaphantsi.Ikhululekile ngakumbi, ayiyityhefu, ayingcolisi, inxamnye ne-oxidation, kwaye akukho lula ukurusa. Iimpawu ezizodwa ezingezizo zesinyithi zeeramics azizukuvelisa pores kwaye zichase ngokufanelekileyo ukukhula kweentsholongwane. Uninzi Iipilisi ezisilayo unokugaya kuphela ubukhulu obunye, ekulula ukusila ngokungalinganiyo. Le grinda inoyilo olulunge kakhulu. Kuphela kufuneka ulawule uxinano lwevalve yokulawula ukumisela ubungakanani bomgubo wokugaya, onokuhlangabezana neemfuno zakho zokupheka ngakumbi, kwaye nomkhosi ulingana. Yithi ndlela-ntle kwindawo yekhadi kwaye musa ukusila. Kuyabanzima kwaye kukuzisela amava agudileyo.Uyilo lweebhetri ezi-4 luzisa amandla awomeleleyo, amaqhosha alula kwaye azinzile, aphezulu ngakumbi, kwaye isandla siziva sigqibelele.
Ufanele ukuba ne- I-pepper grinder enemisebenzi emininzi kwenye, kunye neendleko eziphezulu I-pepper grinder.
Egqithileyo Umenzi wePepper Grinder yeKofu yokuGaya iCeramic yokuGaya iCore
Okulandelayo: Isikhokelo seSpice seTyuwa yePepper enamaxesha ahlukeneyo
Ipepile kunye neTyuwa Mill
Ityuwa kunye nePepper Mills